Beddelaan XRP In Euro
Updated 19/01/2020 08:34
Beddelka XRP In Euro. XRP qiimaha Euro maanta ee suuqyada isweydaarsiga lacagta digital.
10 XRP = 2.09 Euro
isbeddelka sarrifka tan iyo shalay
Sicirka sarrifka XRP to Euro wuxuu leeyahay qiime dhexdhexaad ah dhamaan ilaha. Macluumaadka ku saabsan isu beddelka XRP illaa Euro ayaa la cusbooneysiiyaa maalintiiba hal mar. Qiimaha sarrifka lacagta digital wuxuu leeyahay qiimo celcelis ahaan maalintii. Hadaad leedahay 10 XRP, ka dibna gudaha Austria waad iibsan kartaa Euro. Marka loo eego 1 XRP hadda waxaad u baahan tahay inaad siiso 0.21 Euro. Heerka XRP sicirka ayaa hoos u dhacay marka loo eego Euro ee -272 boqol meelood meel dhibic boqolkiiba.
XRP qiimaha maanta
Heerka Sarrifka XRP In Euro
Usbuuc ka hor, XRP waa la isweydaarsadaa 0.20 Euro. Sanad ka hor, XRP waxaa lagu badali karaa 0.28 Euro. Sadex sano ka hor, XRP waxaa laga iibsan karaa 0 Euro. Isbeddelka heerka sarrifka lacagaha XRP to Euro ee usbuuca waa 3.26%. 23.27% - Isbeddelka heerka sarrifka ee XRP ilaa Euro bishii. Isbeddelka heerka sarrifka lacagaha XRP to Euro muddo hal sano ah ayaa -25.6%.
Saacad Day Usbuucii Bisha 3 bilood Sannad 3 sano
XRP (XRP) In Euro (EUR) qiimaha sicirka
XRP ugu fiican Euro
Bixinta ugu fiican XRP qiimaha sarrifka maanta ee dhammaan suuqyada lacagta digital. Suuqa ugu fiican si aad u iibsato ama u iibiso XRP maanta.
Lykke Exchange XRP/EUR $ 0.25 $ 24 -
CoinMate XRP/EUR $ 0.25 $ 1 404 -
BTC-exchange XRP/EUR $ 0.25 $ 21 -
LiteBit.eu XRP/EUR $ 0.24 $ 55 443 -
Bitpanda Global Exchange XRP/EUR $ 0.24 $ 58 143 -
CoinMetro XRP/EUR $ 0.24 $ 6 437 -
Coinbase Pro XRP/EUR $ 0.24 $ 1 347 224 -
CEX.IO XRP/EUR $ 0.24 $ 22 555 -
Liquid XRP/EUR $ 0.24 $ 28 257 -
XRP ugu fiican Euro dhammaan suuqyada adduunka
Beddelaadda Lacagta digital XRP Euro
XRP (XRP) In Euro (EUR)
10 XRP 2.09 Euro
50 XRP 10.46 Euro
100 XRP 20.91 Euro
250 XRP 52.29 Euro
500 XRP 104.57 Euro
1 000 XRP 209.15 Euro
2 500 XRP 522.86 Euro
5 000 XRP 1 045.73 Euro
Maanta, 10 XRP waxaa lagu iibin karaa 2.09 Euro. Waad iibsan kartaa 5.23 Euro for 25 XRP. Maanta, 10.46 Euro waa la iibin karaa 50 XRP. Maanta, 20.91 Euro waa la iibin karaa 100 XRP. Waad iibin kartaa 52.29 Euro for 250 XRP. Waad ku badali kartaa 500 XRP ee loogu talagalay 104.57 Euro .
XRP (XRP) In Euro (EUR) Heerka Sarrifka
Beddelaan XRP/BTC maanta 19 January 2020
19/01/2020 0.22 0.007104 ↑
18/01/2020 0.21 0.006454 ↑
17/01/2020 0.21 0.003662 ↑
16/01/2020 0.20 -0.008476 ↓
15/01/2020 0.21 0.016765 ↑
XRP ilaa Euro ee 19 January 2020 - 0.22034 Euro. 18 January 2020, 1 XRP = 0.213236 Euro. 17 January 2020, 1 XRP kharashyada 0.206782 Euro. Inta ugu badan ee XRP / EUR sicirka sarrifka ee wuxuu ahaa 19/01/2020. XRP to Euro dusheeda 15 January 2020 waa u siman yahay 0.211596 Euro.
XRP (XRP) In Euro (EUR) shaxda qiimaha taariikhda
XRP iyo Euro
XRP codka lacagta digital XRP. XRP ganacsiga bilawga suuqa sarrifka isweydaarsiga 03/12/2019.